Ulawulo lweeasethi zeDijithali luyichaphazela njani uLawulo loMxholo | Martech Zone
Ulawulo lweeasethi zeDijithali luyichaphazela njani uLawulo loMxholo
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 4, 2015 Douglas Karr
Kwizithuba zangaphambili, sixoxe Luluphi ulawulo lweeasethi zedijithali, Kutheni uLawulo lweeAsethi zeDijithali lubalulekile ekuThengiseni ngokubanzi, njengo Ungazithethelela njani kwiNkcitho yoLawulo lweeAsethi zeDijithali. Kule infographic evela kuLwandiso, banika iinkcukacha ezithile zendlela Ulawulo lwee-asethi zedijithali izokunceda ukuhambisa ngokufanelekileyo ulawulo lokuqukethwe Isicwangciso.
Ngokukodwa, ukugcinwa kwezindlu kunye nokubeka esweni umxholo wakho kwindawo yokugcina izinto kusebenza ngakumbi kunokuba nomxholo uthe saa kwi-imeyile, iiseva nakwezinye iindawo. Izinto zakho ezinokuthengiseka lula kwaye ziyafikeleleka nakubani na onqwenela ukumfumana. Unokulandela umkhondo wokusetyenziswa kunye nokuphindaphinda kwimithombo yeendaba esele ikho. Unako ukuphumeza iinkqubo zokuphonononga kunye nokuvunywa, ukukhawulezisa inkqubo yokupapasha. Kwaye uninzi lokuwa, ulawulo lwee-asethi zedijithali luvumela amashishini ukuba afumane ulawulo olukhulu ngakumbi kwiinguqulelo zomxholo, izikhokelo zohlobo, ukuphelelwa liasethi kunye nokusikelwa umda kokusetyenziswa.
Kule infographic, sibonisa indlela abathengisi abaphumeleleyo abaye baqonda ngayo ukuba umxholo wedijithali kunye nokuqina kweasethi kubaluleke kakhulu. Isizathu? Ukuthengisa umxholo kuzibonakalise njengomqhubi ongenakoyiswa wezikhokelo, ukwazisa ngebrand, ukuzibandakanya kwabathengi kunye ne-ROI.
tags: inkqubo yokuvunywaukufikelela kwempahlaukulawula impahlaIndawo yokugcina izinto zexabisoulawulo lophawuulawulo lokuqukethweuguqulelo lomxholoidamaUlawulo lwee-asethi zedijithaliukulandelela ukusetyenziswa komxholoyandisa
Ngaba ukuLungisa izinto eziMninzi kunokulonakalisa ishishini lakho?